» मनहरीका ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको तयारीमा भिड्दै
मनहरीका ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको तयारीमा भिड्दै
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २२:१८
जयराम मोक्तान, २४ जेठ । पश्चिम मकवानपुरको मनहरीमा शुक्रबारदेखि ९ औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड मनहरी गाउँपालिका स्तरिय छनौट प्रतियोगिता सुुरु भएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न विद्यालयका ३ सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरु प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । मनहरी गाउँपालिकाको आयोजनामा मनहरी ७ मा रहेको राष्ट्रिय रोटरी माविको खेल मैदानमा छनौट प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हो ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले प्रतियोगिताबाट छनौट भई रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरुले राम्रंो नतिजा ल्याउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । ‘प्रतियोगितामा हार जित हुन्छ , हार भयो भन्दैमा हार खानु हँुदैन, बरु त्यसबाट केही सिक्नु पर्दछ, म सबै भाई बहिनीहरुलाई आग्रह गर्दछु’, अध्यक्ष उप्रेतीले भने । खेलबाट समाजमा सकरात्मक कुरा आउने भएकाले मनहरीमा खेलको विकास गर्न गाउँपालिका संधै प्रतिबद्ध भएको समेत उनले बताए ।
प्रतियोगितामा मनहरीका ९ वटा माविका ३ सय जना भन्दा बढि विद्यार्थीहरु सहभागी छन् । प्रतियोगितामा सटफुट , भलिबल ,ज्याबलिङ , थ्रो , हाईजम्प , लङजम्प , रनिङ लगाएतका खेलमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना तथा अन्य विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मिस वर्ल्डको ट्यालेन्ट प्रतियोगिता मिस जापान कानाको डाटेले जितेकी छिन् । ओपेरा गाएर सबैको मन जितेकी मिस जापान नै ट्यालेन्टमा विजयी भएकी हुन् । जीतसँगै उनी सेमिफाईनमा पुगेकी छिन् । सेमिफाईनलमा पुग्ने उनी दोस्रो प्रतियोगी हुन् । यसअघि नै मिस फ्रान्सले टप मोडल कम्पीटिसन जितेर सेमिफाईनलमा पुगिसकेकी छिन् । मिस जापान, एक प्रोफेसनल ओपेरा सिंगर हुन् । जापानको पुरानो राजघरानाकी राजकुमारी समेत रहेकी उनले पोलिटिकल साईन्स अध्ययन गरेकी छिन् । उनी जापानी परम्परागत नाच र धनुरविधामा अब्बल समेत छिन् । उनले जापानिज सहित अन्य ६ वटा भाषा समेत जान्दछिन् । ट्यालेन्ट प्रतियोगितामा मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाको कस्तो रह्यो त प्रस्तुति भन्नेमा सबैको जिज्ञासा हुन सक्छ । आउनुस् यस बारेमा केही चर्चा गरौँ ।
हेटौँडाका युवाहरुले तयार पारेको लघु चलचित्र ‘वास्तब’ रिलिज भएको छ । मुर्चुङ्गा टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको लघु चलचित्र सस्पेन्सका साथै रोमान्टिक जेनरमा निर्माण भएको छ । हेटौँडा निवासी बिक्रम लुङ्वाको कथा लेखन तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्र एस फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको हो । चलचित्रमा मकवानपुरकै दिपक सापकोटा, बि.एन. धिताल, मुना मोक्तान, रामबाबु नेपाली र भोजराज श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ । सम्राज पाख्रिनको छायाँकन रहेको चलचित्रलाई बि.एन. धितालले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रलाई दिपक सापकोटाले सम्पादन गरेका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
द हेटौँडा क्रियुजको ‘नशालु रैछ’ रिलिज (भिडियो सहित)
हेटौँडाको चर्चित डान्स् ग्रुप ‘द हेटौँडा क्रियुज’ को प्रस्तुति रहेको नयाँ गीत ‘नशालु रैछ’ को अफिसियल म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । म्यूजिक भिडियोलाई बुढासुब्बा डिजिटलको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको द हेटौँडा क्रियुजका म्यानेजर दिलकुमार लामाले मुर्चुङ्गा टिभीलाई जानकारी दिए । एस.बि.जी. लामाको शब्द र आवाजमा सजिएको गीतको म्यूजिक भिडियोमा द हेटौँडा क्रियुजका कलाकारहरु विष्णु, अमित, बिसु, दिपक, कृष्ण, सन्ध्या, प्रियंका र अनिताको अभिनय रहेको छ । साथै दिलकुमार लामाको समेत विशेष भूमिका रहेको छ । गीतलाई एस.बि.जी. र देवी रुम्बाले कम्पोज गरेका हुन् । गीतलाई गणेश सन्तोष प्रगाढले एरेञ्ज गरेका हुन् ।
दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउन सफल नेपाली कथानक चलचित्र ‘छिरिङ’ आज हेटौँडाको एनएस सिनेमाजमा प्रदर्शन गरिएको छ । अन्य स्थानमा असोज १२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएता पनि मकवानपुरका दर्शकले ‘छिरिङ’ हेर्न पाएका थिएनन् । तर हेटौँडाका दर्शकहरुले चलचित्र हेर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमै स्टाटस पोष्ट गर्न थालेपछि अन्ततः चलचित्र हेटौँडामा समेत प्रदर्शन गरिएको हो । दर्शकहरुले चर्चित गायक तथा नायक यश कुमार र निर्माता सुनिल माथेमा प्रधानसंग साक्षात्कार समेत गर्ने मौका पाए । चलचित्रको प्रदर्शन अघि आज हेटौँडामा भएको पत्रकारसँगको भेटघाटमा नायक तथा गायक यश कुमारले चलचित्र हलिउड शैलीमा बनेको बताएका थिए । चलचित्र हेरेँसँगै हेटौैैँडाका दर्शकले समेत चलचित्र राम्रो लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चर्चित मोडल पुसन लामाको जीन्दगीको कथा–कभर भिडियोदेखि चलचित्रसम्मको यात्रा
पुसन लामा, नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा चर्चा बटुल्दै गरेकी कलाकारको नाम हो । विशेष गरी नृत्यमा पोख्त पुसनलाई पछिल्लो समय विभिन्न म्यूजिक भिडियो तथा चलचित्रहरुमा समेत देख्न सकिन्छ । सिन्धुलीमा जन्मिएर कलाकारिता क्षेत्रमा अग्रसर पुसनले चर्चित तामाङ चलचित्र ‘घ्रान’ मा समेत अभिनय गरेकी छिन् । त्यस्तै विभिन्न नेपाली तथा तामाङ भाषाका म्यूजिक भिडियोमा समेत उनको अभिनय देख्न सकिन्छ । औपचारिक रुपमा कुनै नृत्य तथा अभिनयको कक्षा नलिएपनि उनले कुशल नृत्याङ्गना र कलाकारको रुपमा आफुलाई उभ्याउन सफल भएकी छिन् ।